Bitcoin Banknotes vanotarisirwa awanike kuSingapore pakazopera gore - Blockchain News
Tngem, munhu crypto Hardware chikwama kambani ratanga mutyairi kutengeswa kwayo Bitcoin Banknotes kuSingapore pamusika.
Tangem ndehwokuti kuti mumuviri kwema vachishandisa cryptocurrency zvakawanda avanoziva noob vatengi, uye anoronga kubudisa mamiriyoni manotsi pakazopera gore.
In Singapore, imwe nyika vane mitemo vari atsigira chaizvo zvose cryptocurrency uye blockchain rwokugadzira, manotsi vachava dziripo kutenga pabazi Suntec City yokugadzirwa chitoro cheni Megafash.
The Notes, iyo vachauya chechi 0.01 uye 0.05 BTC ($92 uye $463 zvichienderana zvakadaro), chaizvoizvo mari-kufanana Hardware wallets.
Previous Post:Coinbase anoronga kuvhura hofisi itsva Chicago
Next Post:12 Chinese mabhanga vaishandisa blockchain mu 2017
Chivabvu 18, 2018 pa 5:38 AM
Chivabvu 31, 2018 pa 3:29 AM
Chikumi 2, 2018 pa 1:00 PM